राष्ट्रिय दलित आयोग भन्छ, ‘अन्तराष्ट्रिय अदालत पुगेर पनि लक्ष्मीलाई न्याय दिलाउँछौं’ | Nepal First Dalit Online News Portal: www.dalitonline.com
काभ्रेका शिक्षक हीरा लामाले आफ्नै विद्यार्थी सुमन नेपालीकी आमालाई उनकै अगाडि बोक्सीको आरोप लगाउदै मलमुत्र खुवार कुटेर हत्या गरेको घटना देशभित्र मात्रै होइन , देशबाहिर पनि निकै चर्को आलोचना भइरहेको छ, यतिवेला । सिग्रो दलित समुदाय आन्दोलनमा उत्रियो । घटनास्थलनमा पुग्नेहरुको लर्को लाग्यो । मिडियाहरु रंगिए लक्ष्मीको हत्या प्रकरणमा । लक्ष्मीको हत्या भएको एक महिना वितिसकेको छ । घटनाभए लगतै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग , राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगका टोली घटनास्थल पुगेर आएको झन्डै एक महिना पुग्न थालेको छ । तर आयोगहरुले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन । घटनास्थलमा पुगेर फर्किएको राष्ट्रिय दलित आयोगले किन आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सकिरहेको छैन त ? किन आफ्नो प्रतिवेदन लुकाइराखेको छ त , आयोगहरु ? राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्यसचिव सिताराम घले परियारसँग लक्ष्मी हत्या प्रकरणमा दलित अनलाइन डटकमका मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानी :
लक्ष्मीको हत्या प्रकरणमा आयोग घटनास्थल पुगेर आयो र अनुसन्धान पनि गरेको छ ,किन आयोगको प्रतिवेदन आउँदैन ? अहिले के भइरहेको छ ?
हो ,राष्ट्रिय दलित आयोग लक्ष्मी परियारको हत्या भएको खबर पाएसँगै निकै गम्भिर ढंगबाट हेदै ,घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान गरेर आएको छ । हामीले अनुसन्धान मात्रै गरेका छैनौं । घटनाको वस्ताविकता पत्ता लगाउने लक्ष्यबाट काम गरिरहेका पनि छौं । हाम्रो काम घटनाको अनुसन्धान गर्न मात्रै होइन । दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन हाम्रो कर्तव्य हो ।
उनको श्रीमानले लक्ष्मीको मृत्यु पछि प्रहरीमा उजुरी गर्न गए । घटनास्थलमा आलो रगत रहेको भन्दै प्रहरीले श्रीमानले १ लाठी हिर्काएको आरोप छ । प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्कामा यहि कुरा उल्लेख गराएर हिरा लामा , काइली तामाङको र मिलन परियारको हस्ताक्षर गरायो । मिलनले हस्ताक्षर नगर्दा परियारलाई एक झापट प्रहरीले हानेर उनी सहितको किटानी जाहेरी तयार पारे मात्रै दर्ता गर्ने भन्दै सोहि अनुसारको दर्ता गरिएको रहेछ । हिरा लामा माओवादी आस्थावान् रहेछन् । घटना भएको दिन माओवादीका पुर्व सांसद समेत त्यहाँ भएको थाहा भयो तर उहाँहरुले पनि पिडीतको पक्षमा एक शब्द नवोली दिएको पाइयो । अनुगमन गर्न आयोगका टोली घटनास्थलमा नै पुगेको थियो । मानव अधिकार आयोगले गरेको थियो । हामिले काभ्रेका एसपी सकुल थापालाई भेटेर पनि कुराकानी गरेका थियौं । हिरासतमै हुदाँ मिलन संग कुरा गर्दा उनले यस्तो भनेका छन ‘प्रहरीले बेसरी पिट्यो, जहाँजहाँ हस्ताक्षर गर्न भन्यो, त्यहीँ गरे । तर मैले बिरामी श्रीमतीलाई कहाँ पिट्छु’ । प्रहरीले घटनास्थलमा आलो रगत देखेको र लक्ष्मीको घरमा पनि आलो रगत हुदाँ त्यही आधारमा मिलन लाई अनुसन्धान गरिएको दावी छ । शिक्षण अस्पतालमा डाक्टर हरि ओस्ती र मैले पनि लास हेरेर्को हो । तालुबाट रगत चुहेको थियो । उसकै श्रीमानले हिर्काएर रगत आएको होइन । पोष्टमार्टम रिपोर्टले २० गतेको चोटले गर्दा मृत्यु भएको देखाएको छ ।
आयोगले अध्ययन गर्ने, प्रतिवेद निकाल्ने यतिले मात्रै पुग्छ ? थप केही गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
हाम्रो काम प्रतिबेदन दिने मात्र होइन् । हामी यतिमा मात्रै सिमित पनि छैनौँ । सवैलाई म जानकारी गराउन चाहान्छु । सम्बन्धित निकाय सम्वेदनशील बनाउन दवाव मुलक अभियान संञ्चालन गरेका छौँ । अन्य सरोकारवालाहरु संग सहकार्य गरेर अभियान, आन्दोलन समेत गरेका छौँ । नीति निर्माण तहमा छलफल, बहस नियमित रुपमा गरेका छौँ । अजित मिजार हत्या प्रकरणमा गाडिएको लास समेत निकालेर फेरी पोष्टमार्टम गराउनु परेको तपाँइ हामीलाई थाहा छ । लक्ष्मी परियारको केसमा पनि निष्पक्ष छानविनको लागी हामी लागी परेका छौँ । पीडितले न्याय नपाउँदा सम्म हाम्रो संर्घष जारी रहनेछ ।
हामीलाई लाग्छ अजितको अझै पनि अनुसन्धान राम्रो संग भएको छैन । बाबुले पैुसा दिए अनि । दिदीले मिलापत्र गर्ने बेला तँलाई तीन दिनभित्र मार्छु भनेकी थिइन । तीन दिनमा नै उनी मारिए । यो देशबाट फितोलो रुपमा अनुसन्धान भएमा अन्तराष्ट्रिय रुपमा अनुसन्धान गर्नको लागि पनि हामी सक्षम छौँ , त्यो हामी गर्नेछौँ । त्यसका लागी हामीले सबै प्रमाणहरु सुरक्षित राखेका छौँ ।
कानुनी राज्यमा कुनै एक दलितको हत्या हुँदा कारवाही गर् भनेर सडकमै आउनु पर्छ ? प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु पर्छ ?
यस्तै छ । हाम्रो नेपाली समाजमा ।जातीय छुवाछूतकै कारण हत्या गरिन्छ । कुटपिट हुन्छ , हामी दोषीलाई कारबाही गर भनेर सडक र प्रधानमन्त्रीसँग पुग्नुपर्छ । नेपाली समाज र सरकारी संयन्त्र बाहुनवादी चिन्तनले जगडिएको छ । नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ मान्छे मार्नेलाई कारवाही गर भन्दै प्रधानमन्त्री भेट्नुपर्छ । बिषेश गरिबहरुको हकमा, यो हाम्रो रहर हैन बाध्यता हो । दलित समुदायमा शिक्षा र चेतनाको कमी छ, कानुनको बारेमा जानकारी पनि छैन, प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न मान्दैन, दर्ता गरेमा घटनालाई तोडमोड पारेर मुद्धा कमजोर बनाउने खेलमा लाग्छ । दलितहरु कमजोर छन्, गरिव छन् । उनीहरु कसैलाई घुस दिन सक्दैनन् उनीहरुले न्याय पाँउदैन् अनि हामी बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपर्छ ।
हामीले लक्ष्मीको केशमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छलफल गरेका छौँ । प्रधानमन्त्री अजित र लक्ष्मीको मुद्धामा एकदमै सकारात्मक पाएका छौँ । उहाँले यी घटनाका दोषीलाई कडा कारवाही गराएर जातिय विभेदका घटना कम गराउन नजिर बसाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । त्यही अनुसार उहाँले सबैलाई निर्देशन दिनुभएको पनि छ । विडम्वना कर्मचारीतन्त्र कहिल्यै दलितको सवालमा सम्वेदनशील हुदैन, भएको छैन ।
राजनीतिक तहबाट सबै कुरा हुन्छ । कर्मचारीको विगत देखि नै असहयोग रहेका कारण जातिय विभेदको मार दलित समुदायले भोगीरहेका छन् । बनेका कानुनको कार्यान्वयन भएको छैन । दलित आन्दोलन गहन रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । दलित आन्दोलन गैरसरकारी सस्थाको क्रियाकलापमा मात्र सिमित छ । ४० जना सांसद अहिले भएर पनि संसदमा दलितको आवाज उठ्दैन , दलित आयोगले पनि उदेश्य अनुरुप काम गर्न सकिरहेको छैन । अनि अरु विकल्प नभएपछि आन्दोलन त गर्ने प¥यो नी हैन र ?
राजधानीको बगलमै जातिय विभेदका घटना घट्दा दलित आयोग र दलितको क्षेत्रमा काम गर्ने सस्थाहरुलाई अप्ठेरो लागेन ? दुर्गम क्षेत्रका
दलित समुदायले के आशा गर्ने तपाईहरु प्रति ?
यो त राजधानी बाहिरको कुरा हो । काठ्माडौँमै पनि जातका आधारमा डेरा नपाएका धेरै घटना भएका छन् । कतिपय लाई हामीले कारवाही पनि गरेका छौँ । हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी छन् । एक त आज सम्म दलित आयोग संवैधानिक हुन सकेन । हामीले चाहेर पनि केही कम काम भएको होला । संघसस्थाहरु क्रियाकलापहरुमा मात्र सिमीत छन् । यो समाजको चेतना बिषय भएकाले राज्यले यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखे मात्र चाडै जातिय बिभेदको अन्त्य हुन सक्छ । जसरी चन्द्र समशेरले सति प्रथा हटाएका थिए त्यसरी नै राज्यले प्राथमिकता दिएमा मात्रै यसको अन्त्य सम्भव छ । दलित आयोगले देशभरमा भएका जातिय विभेदका घटनामा समान तथा गम्भीर रुपमा लिएका छौँ ।
आयोग लक्ष्मी परियार र अजित मिजार प्रकरणका अभियुक्तहरुले सजाय पाँउनेमा कत्तिको बिस्वस्त छ ?
हामीले विभिन्न अप्ठेराहरु संग लड्दै मुद्धा अदालतमा पु¥याएका छौँ । सम्मानित अदालत र कानुनमा विश्वास गर्नैपर्छ । कमजोर र पिडितहरुको सहारा भनेकै कानुन हो । तर कानुन पनि अन्धो हुन्छ भन्ने मा हामी सजक पनि हुनैपर्छ । अदालतले न्याय दिन्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ । यदि जिल्ला अदालतले न्याय दिएन भने हामी सर्वोच्च अदालत सम्म पनि पुग्छौँ । यति लक्ष्मी र अजितको घटनामा सरकार सम्मानित अदालतहरुले गलत निर्णय लिए हामी राष्ट्रिय दलित आयोग समेत अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पुगेर भएपनि लक्ष्मीलाई न्याय दिलाउँछौं ।
लक्ष्मी परियारको घटनालाई अव कसरी अगाडी बढाउँदै छ आयोगले ?
दोषीलाई सजाय दिने काम अदालतको हो । त्यो प्रक्रियामा छ ठिकै छ । उनका श्रीमानलाइ कस्टडीमै ज्यान मार्ने धम्की समेत आएको हामीलाई जानकारी आएको छ । यस विषयमा हामीले प्रहरी संग छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । मिलन र उनको परिवार, बालबालिकालाई सुरक्षाको प्रत्याभुती दिलाउनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता छ । एक महिना देखी शिक्षण अस्पतालमा रहेको लक्ष्मीको लाशलाई हिन्दु परम्परा अनुसार सतगत गर्ने तयारी भइरहेको छ । आयोगको तर्फबाट स्थानिय विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास शाखालाई निवेदन लेखेको छु । हिन्दु संस्कार अनुसार दाहसंस्कार गराउन र उनका श्रीमानलाई पनि निकाल्ने र उनले नै दाहसंस्कार गराउनेछौँ ।
बेसहारा बालबालिकाको लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका छौँ । यसको काम गृह मन्त्रलायबाट हुँदो रहेछ । उनीहरुलाई सरकारको तर्फबाटै आवासीय विद्यालयमा राख्ने पहलमा छौँ । अष्ट्रेलियाबाट रिता परियारले बालबालिकाको लागी १ लाख १ एक हजार एक सय र मिरा परियारले १० हजार दिनु भएको छ । हामीले राज्यबाट के हुन्छ हामी राज्यलाई घच्घच्याएका छौ । निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि हामीले प्रयास गरेका छौं ।